Denmark kwụsịrị njedebe COVID-19 mgbe mkpọchi ụbọchị 548 gasịrị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Denmark na -agbasa akụkọ » Denmark kwụsịrị njedebe COVID-19 mgbe mkpọchi ụbọchị 548 gasịrị
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Denmark na -agbasa akụkọ • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Malite n'etiti abalị na Septemba 10, gọọmentị Denmark akpọghị nje COVID-19 dị ka "ọrịa mmekọrịta ọha na eze".
Ndị ọchịchị Denmark kwupụtara na a na -achịkwa ọrịa ahụ.
Agaghị etinye usoro pụrụ iche na Denmark iji mesoo COVID-19 malite na Septemba 10.
Ndị ọchịchị Denmark debere ikike ịkwado usoro pụrụ iche “ma ọ bụrụ na oria ojoo ahụ na -eyi egwu ọrụ dị mkpa na ọha mmadụ”.
Ndị ọrụ gọọmentị Denmark kwupụtara na malite na elekere 12:00 nke ụtụtụ na Septemba 10, nje COVID-19 anaghịzi ekewa dị ka "ọrịa mmekọrịta ọha na eze" na mba ahụ, na agaghị enwe usoro pụrụ iche iji lụso coronavirus n'ime ókèala Denmark.
A kagburu iwu mgbochi COVID-19 niile fọdụrụ na mba ahụ ruo taa, na-eme Denmark Steeti mbụ na European Union (EU) ga-alaghachi kpamkpam n'usoro ọrịa kwa ụbọchị.
Amachibidoro mmachibido iwu niile nke ndị ọchịchị Danish na mbụ, gụnyere ihe ndị chọrọ ngafe COVID ịbanye na klọb abalị na ebe ndị ọzọ, mmachibido iwu nnọkọ oriri na ọ masịụ na-eyi nkpuchi, ka ebuliri, ụbọchị 548 mgbe Prime Minista Denmark Mette Frederiksen buru ụzọ kwupụta mkpọchi n'ime ya. obodo.
Na Machị 2020, Denmark so na mba ndị mbụ manyere usoro siri ike iji lụso COVID-19.
N'ịbụ ndị kwupụtara mkpebi mbụ ịhapụ ntọala iwu maka mmachi n'ọnwa gara aga, ndị ọchịchị Denmark kwuru na "a na -achịkwa ọrịa ahụ." Ha debere ikike ịkwado usoro pụrụ iche “ma ọ bụrụ na oria ojoo ahụ na -eyi egwu ọrụ dị mkpa na ọha.”
Dị ka ndị ọrụ ahụike Denmark si kwuo, “dekọọ ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị elu” nyeere obodo aka isetịpụ ụkpụrụ na European Union wee laghachi na ndụ na-enweghị mgbochi ọ bụla metụtara COVID. Mmadụ atọ n'ime ụmụ amaala Denmark anọ na -ewere ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa a ọrụ obodo, dị ka nyocha Eurobarometer mere n'ọnwa gara aga n'aha ndị omeiwu Europe.
N'ime otu puku ndị Denmark ahọpụtara, 1,000% kwetara n'okwu ahụ na ekwesịrị ịgba onye ọ bụla ọgwụ, ebe 43% kwuru na ha na -ekwenye. Maka EU dum, pasent nke ndị kwenyere ma ọ bụ na -ekwenyekarị na nkwupụta a dị 31.
Ka ọ na-erule Septemba, ihe karịrị 73% nke nde mmadụ 5.8 nke Denmark bụ ọgwụ mgbochi nke ọma, yana ihe karịrị nde 8.6 ọgwụ mgbochi COVID a na-enye. N'ime ọrịa na -efe efe, Denmark debara aha ihe karịrị ọrịa 352,000.